KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Waxgaradka G/Hiiraan oo Deeq Gaarsiiyay Isbitalka M/Baladweyne
Thursday 3 January 2013 17:18
Waxgaradka G/Hiiraan oo Deeq Gaarsiiyay Isbitalka M/Baladweyne
Muqdisho (KON) Qaar ka mid ah waxgaradka gobalka Hiiraan ayaa deeq lacageed maanta waxay ku wareejiyeen maamulka isbitalka way nee magaalada Baladweyne.
Deeq lacageed oo ah mid ay waxgaradka gobolka Hiiraan iska soo ururiyeen ayaa waxey ugu talagaleen iney ku taageeraan isbitaalka magaaladaasi.
Waxgaradka ayaa sheegay in ay deeqdaan ugu talagaleen in lagu sii wado howlaha isbitalka weyn ee magaaladaasi Baladweyne maadaama hada aysan jirin wax hay’aad ah oo garoonka gacanta ku haysa.
Maamulka Isbitalka ayaa dhankooda iyana waxay u mahadceliyeen waxgaradka maanta deeqda lacageed soo gaarsiiyay isbitalka waxaana maamulku uu dheegay in ay muhiim tahay in lees kaashado.
Isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ayaa waxaa ku xeran oo adeeg caafimaad ka hela dadka ku dhaqan gobolka Hiiran iyo gobollada kale ee ku dhow dhow balse Isbitaalka ayaanay hada jirin cid gacanta ku heyn maadaama hay’adda MSF oo isbitaalkaasi gacanta ku heysay ay isaga baxday gobolka.